Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2748 - 2749 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2748 - 2749
Funda Isahluko 2748 - 2749 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
UCharlie wayazi ukuthi uPollard wayengusolwazi, futhi ongqondongqondo abaphezulu ngale ndlela babevame ukuzethemba kakhulu, ngakho-ke kumele bagqoke izibuko ezithile ezinemibala lapho bebuka abantu abanjengo-Orvel.
Ngenhlanhla, uPollard akazange abambeke kakhulu. Ngemuva kokulalela isingeniso sikaCharlie, wayeka ukudonsa kwakhe ngaphakathi.
UCharlie wasukuma wathi kubaba nendodakazi: “Malume, Melba, asihambe.”
UPollard wanqekuzisa ikhanda wasukuma. UMelba eceleni wayeklinywe kudala futhi akakwazanga ukulinda. Ufuna ukusukuma.
Ngokuyinhloko uhleli kusofa, umuzwa wokuklinywa awuthokozisi kakhulu.
Eqinisweni, wayefuna ukusukuma kudala, kepha uBaba noCharlie babehleli bobabili, futhi wayengafuni ukubambeka lapho njengesilima, ngakho-ke wayekwazi nje ukuqinisa amazinyo futhi aphikelele ekutheni anganyakazi kakhulu.
Kepha akazange aphuphe ukuthi okwamanje lapho esukuma, ngoba amandla okuxhasa phezulu wezandla zakhe ayenamandla kancane, wavele wezwa ukuthi ingwegwe lomzimba ongaphezulu ongafake zambatho ngemuva kwakhe iqhume ngaso leso sikhathi!
Ibhande eliqinile eliqinile lavele labuyela emuva, okwenza uMelba amemeze ngokwethuka!
UPollard uphuthume wabuza ngokukhathazeka: "Melba, yini inkinga yakho?"
Inhliziyo kaMelba yokufa manje isiphelile.
Wayengaba namahloni kanjani ukusho ukuthi ingwegwe yezingubo zakhe uqobo yayizelulwa yodwa?
Amagama anjalo kunzima ukusho.
Ngakho-ke, angaluma kuphela inhlamvu bese ethi: “Baba, ngiyaphila, kodwa ngisukume kakhulu manje, ngakho ikhanda lami linesiyezi.”
UPollard wameseka ngokushesha futhi wabuza ngokukhathazeka: “Kanjani? Ucabanga ukuthi akunandaba? Uma inkinga inkulu kakhulu, ubaba uzokuyisa esibhedlela! ”
UMelba waqhweba ngokushesha isandla sakhe wathi, “Cha, cha, cha! Kulungile manje! ”
Njengoba esho, washesha wabeka phansi isandla sakhe esiphakamisiwe futhi, ngoba ingwegwe yayiphukile, inqobo nje uma ephakamisa ingalo, ingubo engaphansi kwengu -3 yayingakhanjwanga kahle. Uma ukunyakaza bekukuncane kancane, izingubo ezingaphansi kwezingu-3 bezizokhishwa ngokuphelele futhi zingakwazi ukubuyela emuva. Yebo, lokho kungaba amahloni kakhulu!
UPollard uphefumulele phezulu, wathi: “Ngicabanga ukuthi awukakutholi ukuphumula okuhle. Phumula kahle kulezi zinsuku ezimbili, bese uzidlela amandla. ”
UMelba angalandela nje amazwi akhe avume ngekhanda bese ethi: "Kulungile baba, ngizokwenzenjalo."
Ngemuva kokukhuluma, waphinde wabheka uCharlie, futhi wakhululeka kancane lapho ebona ukuthi uCharlie akakhombisi lutho olungajwayelekile.
"Kubukeka sengathi ehlazweni okwamanje, akekho ubaba noCharlie abaziyo ubuqiniso bendaba… Uma kungenjalo, akanandawo yokufihla ukuphoxeka kwakhe ...
Ecabanga ngalokhu, wathukuthela kancane.
Ebheka uCharlie wazicabangela: “Ingabe lesi sibalo sale ntokazi sisuke sikulindele kangaka? Ungangithengela kanjani okuncane kakhulu… Ukuphambuka kosayizi kukhulu kakhulu, kuhlushwa kakhulu! ”
Yize uCharlie ebukeka ezinzile njengenja endala, inhliziyo yakhe isivele iphazamiseke ngokuphelele!
Yeka ukuqonda kwakhe!
Njengamanje, lapho evela eMelba ezwa umsindo ongamangalisi ongaphumeleli, wezwa ngokushesha ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Lowo msindo wawunjengomsindo webhande eliqinile eliqina ngokunqamuka ngokuzumayo.
Kodwa-ke, njengoba umsindo wawuvela ezingutsheni zakhe, lapho uphuma, empeleni kwakungekho ivolumu engaqashelwa.
Kodwa-ke, ngenxa yokuzwa okucijile kukaCharlie, lelo zwi lalinjengebhande lokunwebeka elaphuka phambi kwamehlo akhe.
Ngakho-ke, wacishe wabona ngokushesha ukuthi kunenkinga ngomzimba kaMelba ongenhla wezingubo ezintathu.
Wayebuye azibuze: “Kwenzekani kanti? Yingoba izinga lezimpahla engilithengile liphansi kakhulu? ”
“Kodwa akufanele! Noma ikhwalithi ayiyinhle, iningi yintambo nocingo. Asikho isizathu sokuphuka, akunjalo? ”
UCharlie ngokungazelelwe wabona ukuthi kungenzeka yini engqondweni yakhe. Wamangala!
Wabona ngokunganaki uMelba, futhi ngokuzumayo wathola ukuthi ijika lomzimba wakhe ongaphezulu elisongwe engutsheni lalibonakala liqhuma kancane m0re ngokuphazima kweso.
"Yingoba usayizi awuthengile mncane kakhulu ?!"
Ngokungazelelwe wabona ukhiye wenkinga!
Ingubo ayithengile ekuqaleni kwakuyingubo eyenziwe ngezifiso esezingeni eliphezulu, ngakho-ke ikhombisa ukubukeka okuhle.
Ngamanye amagama, ukugqoka le suti, amandla nobuthakathaka besibalo kuzoba sobala kakhulu.
Ebheka indlela uMelba ayegqoka ngayo le ngubo phambilini, wabona ukuthi empeleni yayingekho imali enkulu, futhi akazange alokothe ​​asho ukuthi kwakuyisikhumulo sezindiza, futhi kwakungcono kunesikhumulo.
Kepha ukubheka manje, kusobala ukuthi amagquma!
Lokhu kusho nokuthi isibalo sikaMelba empeleni siyabikezela, besifihlwa ngaphambili kuphela.
Kuhlanganiswe ngomsindo ongafakwanga manje…
UCharlie wafuna ngokushesha ukuqonda ukuthi kwenzekeni.
Ngalesi sikhathi, ubenamahloni kakhulu.
Wathenga ngomusa izingubo zabanye abantu zangaphakathi nezangaphandle. Wayefuna ukusebenzelana kahle nabanye, kepha kuthiwani manje?
Ayigcinanga nje ngokubanga izinkinga eziningi kwabanye, yaze yabangela namahloni amakhulu kangako.
Okulandelayo, kufanele baye endaweni yokudlela bayodla, akakwazi ukuvumela uMelba ahambe kanjena, akunjalo?
Ecabanga ngalokhu, uCharlie wabubula ngaphakathi, futhi wacabanga ngaphakathi: “Hheyi! Uma wenze okuthile okungafanele, kufanele ucabange ngendlela ongazenzela ngayo wena! ”
Ngakho wakhuluma ngomoya ophansi wathi: “Imoto yami ime ngezansi. Ake siqale siye ehhotela. Nginokuthile komuntu siqu. Kungathatha cishe imizuzu eyishumi. Ngiphinde ngihluphe uMalume noMelba ukungilinda ehhotela isikhashana. ”
UPollard wamomotheka wathi, “Akunandaba, ungavele uhambe uyoba matasa uma kukhona onakho. Anginalo ikilasi ntambama, ngakho angijahile. ”
UMelba ohlangothini wayenamahloni ngokweqile ngalesi sikhathi, futhi wayegcwele imicabango yokuthi uzokwenzenjani ngokulandelayo. Akayizwanga into uCharlie ayekhuluma ngayo.
Wayefuna ukuthola isizathu sokuhoxa kuqala, bese ephuthuma ethenga imvunulo yangaphansi efanelekayo ukuyishintsha.
Kodwa ushintshe umqondo wakhe: “Angikwazi ukusho noma yini ukuthi ngizihambele manje… Phela, nginesimo esiphoxa kangaka. Bekungeke yini kube amahloni ukubonwa ngumuntu lapho ngihamba ngetekisi noma ngithenga okuthile? Sawubona… Ngizoqale ngidle noCharlie nobaba, bese ngiya ekhaya ngqo noBaba emva kokudla. Uma sengifikile ekhaya, ngizosebenzisa izinaliti nemicu ukuhlanganisa leyo ephukile, bese ngiphuma ngiyothenga entsha! ”
Ecabanga ngalokhu, wahamba ngemuva kwabo ngokwesaba, futhi amehlo akhe ayengalawuleki. Wayebukeka kwesobunxele nangakwesokudla, ngenxa yokwesaba ukutholwa abanye ngalesi sikhathi.
Ngenhlanhla, osolwazi namalungu obuhlakani esikoleni babeyodla emini, ngakho-ke akekho omunye umuntu owahlangabeza endleleni.
UMelba ugcine edonse umoya waze wahlala esihlalweni esingemuva eRolls-Royce.
UCharlie wayecabanga ukwenza iphutha lakhe, ngakho-ke washayela ngenkathi ebheka inxanxathela yezitolo eseduze ukuze abone ukuthi ikhona yini indawo efanelekile, futhi kamuva wathenga isethi entsha yeMelba.
Lapho esondela endaweni yokudlela, ekugcineni wabona inxanxathela yezitolo ephelele. Emabhodini amakhulu amakhulu esangweni lezitolo, bekunophawu lwezimpahla zabesifazane ezingaphansi kwezingubo zangaphansi, abone ukuthi uzolile.
Ngalesi sikhathi, uMelba ubuye wabona ibhodi lezikhangiso, wahluleka ukukhala buthule: “Hheyi… Ukube bengingumuntu onamandla amakhulu njengasemabhayisikobho, bengizothumela lesi sitolo ngasikhathi sinye ngithenge. Yigqoke futhi ubuyisele emuva i-teleport… ”
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2746 - 2747